Alshabaab oo xalay weerar ku galay xaafado ka mid ah Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo xalay weerar ku galay xaafado ka mid ah Jowhar
Mareeg.com: Alshabaab ayaa xalay weerar ku qaaday degmada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo magalaadaas dhawaanahan ka nasatay weerarada tooska ah, inkastoo ay jireen qaraxyo aan badneyn.
Xalay saqdii dhexe ayaa dadka Jowhar ku kaceen daryanka rasaasta, kadib markii Alshabaab dhanka bari kasoo weerareen magaalada, waxaana la sheegay iney galeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada sida xaafadda Horseed.
Saldhiga la weeraray ayaa la sheegay inuu ahaa xarrun ay degan yihiin ciidamada milateriga Soomaaliya, waxaana iska hor-imaadka dhacay ku dhintay hal qof, mid kalana wuu ku dhaawacmay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan milateriga Soomaaliya oo magaciisa qariyey.
Maamulka degmada Jowhar, kan gobolka iyo saraakiisha ciidamada ayaan ka hadlin weli falkii xalay ay Al-shabaab ku galeen qaybo ka mid ah Jowhar, waxaase ay tani qayb ka noqonaysaa falalka ay Al-shabaab ka geysanayso qaybo ka mid ah dalka tan iyo markii ay dhalatay bishan Ramadaan.
Dhawaanahan ayaa waxaa soo baxayey warar sheegaya in Alshabaab isku uruursanayaan deegaanka dhanka bari kaga began degmada Jowhar, halkaasoo ay xalay kazoo weerar tageen.
Djibouti set to deploy extra troops to Somalia
Isbaarooyin layaab leh oo kusoo kordhay Shabeellaha Hoose!